American Rescue Plan Mutemo kubatsira kudzorera US yekudyara indasitiri, chengetedza mabasa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Culinary » American Rescue Plan Mutemo kubatsira kudzorera US yekudyara indasitiri, chengetedza mabasa
Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Passage yeRestaurant Revitalization Fund inouya rinenge gore rimwe chete mushure mekunge National Restaurant Association yakurudzira Congress kuti igadzire chirongwa chekuyamura indasitiri
Mutungamiri Joseph R. Biden, Jr. vakasaina iyo American Rescue Plan Mutemo mumutemo nhasi
$ 28.6 bhiriyoni Yekuvandudza Mari Yekudyara (RRF) ndicho chakakosha kupora chishandiso cheindasitiri kusvika parizvino
Chikafu chekutengesa chikafu chadonha madhora mazana maviri nemakumi mashanu nemashanu uye maresitorendi 255 110,000 akavhara mukati megore rapfuura
Nhasi, Mutungamiri Joseph R. Biden, Jr. vakasaina iyo American Rescue Plan Mutemo kuva mutemo unogadzira iyo $ 28.6 bhiriyoni Yekudyara Revitalisation Fund (RRF), chinonyanya kukosha kupora chishandiso cheindasitiri kusvika zvino. Chikamu chekupedzisira chebhiri chinouya rinenge gore rimwe chete mushure mekunge maresitorendi ekutanga akarairwa kuti avhare uye National Restaurant Association yakatumira hurongwa kuCongress ichikurudzira kuumbwa kwechirongwa chakanangana nerubatsiro rweindasitiri. Kubva ipapo, chikafu chekutengesa chikafu chadonha madhora mazana mashanu nemakumi mashanu nemashanu emadhora uye maresitorendi 255 110,000 akavhara.
"Kugadzirwa kweRestaurant Revitalization Fund ichave nzira yekumutsiridza maresitorendi nekuchengetedza mabasa nyika yese," akadaro Tom Bené, Mutungamiri & CEO we National Restaurant Sangano. “Takatarisa kubva pakutanga kwedambudziko iri rave rekuona kuti nzvimbo dzekudyira dzatinofarira dzinokwanisa kuwana rubatsiro rwavanoda kuti vararame. Homwe iyi kuhwina kweresitorendi diki uye dzakaomesesa dzakabayira uye nekuvandudza kuti dzirambe dzichishandira nharaunda dzadzo. ”
Iyo RRF ichagadzira chirongwa chitsva chemubatanidzwa chevaridzi veresitorendi vane makumi maviri kana mashoma nzvimbo. Vashandisi vanogona kunyorera rubatsiro rwemutero-rwemahara rwe kusvika pa $ 5 mamirioni nzvimbo, kana kusvika pa $ 10 mamirioni emabasa akawanda-enzvimbo. Mari yemubhadharo inotemwa nekubvisa 2020 kutengesa kubva pamitero ye2019.
Mari dzinobva kumabhizimusi dzinogona kushandiswa pane yakawanda mari yekushandisa kupfuura zvirongwa zvekuyamura zvakapfuura, zvinosanganisira mogeji kana rendi, zvinoshandiswa, zvekushandisa, zvekudya uye zvinwiwa zvinyorwa, mubhadharo, uye mari yekushandisa. Mabhirioni mashanu emadhora echikwama ichi achaiswa padivi kumaresitorendi ane maresiti akawandisa pasi pemadhora mazana mashanu ezviuru uye, kwemavhiki matatu ekutanga enguva yekunyorera, iyo Bhizinesi Diki Yekutonga ichaisa pamberi kupa mibairo yevakadzi-, veteran-, kana vezvemagariro uye zvehupfumi- vane mabhizinesi.
"Mari idzi dzichabaya sisitimu inodikanwa padanho rekutengesa kuti itange kuenzanisa kukuvara kwehupfumi kwakaitwa apo maresitorendi anga achinetseka," akadaro Bené. "Tichiri rwendo rwurefu kubva pakupora zvizere uye zvingangoita kuti mari yemubatsiro izodiwa kuti tiendeko, asi nhasi indasitiri ine tariro yeramangwana."
Sangano reNational Restaurant Association ratungamira mhinduro yeindasitiri padenda iri. Kushanda neCongress uye ese maTrump neBiden Administrations, Sangano rakaona kuti maresitorendi angave nematurusi akawanda uye anotsigira sezvinobvira kurarama. Izvo zvaisanganisira kuchengetedza kwakakosha kurapwa mukusika, uye nekuvandudzwa kwakatevera kuPaycheck Kudzivirira Chirongwa, icho chakapa zvinopfuura madhora makumi manomwe emabhiriyoni mukutsigira maresitorendi kusvika zvino; kuwedzerwa kweVashandi Yekuchengetedza Mutero Kiredhiti; kuwedzerwa kweiyo Mukana Webasa Mutero Kiredhiti; uye kuiswa muchirongwa cheEconomic Injury Disaster Loans chirongwa.
"Kubva pakutanga, taiziva kuti denda iri raizove njodzi yakaipisisa yati yamboitika muindasitiri yeresitorendi," akadaro Sean Kennedy, Executive Deputy President wePublic Affairs weNational Restaurant Association. "Takagadzira gwara remigwagwa yeCongress neHurumende kumaturusi akange aripo kare asi aigona kushanda zvirinani mumaresitorendi, uye hurongwa hwekugadzira zvirongwa zvitsva zvakakosha senge RRF. Zvishandiso izvi zvakagadzira hwaro hwemaresitorendi emarudzi ese uye saizi kuti vararame, uye ikozvino neRRF iripo, ndiyo ichave hwaro hwatinotanga kuvaka patsva. ”